प्रधानमन्त्री ओलीका कारण देश दुर्घटनामा : याेगेश भट्टराई::अनुसन्धान अनलाइन डटकम
प्रधानमन्त्री ओलीका कारण देश दुर्घटनामा : याेगेश भट्टराई
बिर्तामोड, पुष १८ । संसद विघटनविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले झापाको बिर्तामोडमा विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको छ ।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरेको हो । ओली प्रतिगमनका विरोधमा भएको प्रदर्शनमा २ हजारबढीको सहभागिता रहेको थियो । प्रदर्शनका लागि झापाका विभिन्न स्थानबाट बिर्तामोड आइपुगेका प्रचण्ड– नेपाल समूहका कार्यकर्ताले ‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौँ, भारतीय सेना लिम्प्याधुरा कालापानी छोड्, विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।
विरोध प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले सम्बोधन गर्दै जनताले मत दिएर देश बनाउने जिम्मेवारी दिएका जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा आउन बाध्य बनाएको जनाए । देशमा शान्ति कायम गर्न, गरिवी हटाउन, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मा दिएका जनतालाई ओलीले धोका दिएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीका कारण देश दुर्घटनामा गएको तर्क गरेका नेता भट्टराईले पुनः पार्टी एक भएर अघि बढ्ने भन्दै नागरिकलाई संयमित हुन आग्रह गरे । ओली र प्रचण्डले दुई क्याप्टेन भएर देश चलाउने सहमति गरेपनि ओली एक्लै अघि बढ्न खोज्दा जहाज दुर्घटनामा पर्ने संकेत गरे । नेता भट्टराईले अर्को क्याप्टेनलाई साथमा लिएर अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरे ।
ओलीलाई सही दिशामा लाग्न आग्रह गरेका भट्टराईले नेकपाको आन्दोलन ओलीको राजनीतिक जीवन रक्षाका लागि गरिएको तर्क गरे । “हुलहुज्जत र बल प्रयोग गरी ओलीले कदम अघि बढाएका छन्” भट्टराईले भने, “यो कदम चाल्ने अधिकार तपाईँलाई कुन संविधानले दियो ?” प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएर संविधानभन्दा माथि उठेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भट्टराईले जनाए ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कारण नेपालको संविधान २०७२ धरापमा परेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले वौद्धिक नागरिक बस्ने झापा जिल्लाको खिल्ली उडाएको तर्क गरे । पार्टीले असहयोग गरेको कारण संसद विघटन गरेको भनेर नागरिकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रम छर्दै आएको नेता भट्टराईको तर्क छ । “माधव नेपालको प्रस्तावमा तपाईँलाई संसदीय दलको प्रमुख बनाइयो, हामीलाईसम्म थाहा नदिइ तपाईँले प्रचण्डसँग मिलेर पार्टी एकता गरी आलोपालो देश चलाउने भनेर हस्ताक्षर गर्नु भयो, त्यसमा पनि हामी खुशी भयौँ, सहमति जनायौँ” भट्टराईले प्रश्न गरे,‘ आज पार्टीले सहयोग गरेन भन्दै भ्रम छर्न हजुरलाई लाज लागेन ? झापालीको भाषा यस्तै हुन्छ ? पार्टीको विधानमा केपी ओलीबाहेक कोही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने कहाँ लेखेको छ ? ’
पार्टीभित्रका १० लाख कार्यकर्ता ओलीले बनाएको भन्ने भ्रमसमेत हटाउन आग्रह गरेका भट्टराईले गल्ती गर्ने ओलीलाई जिन्दाबाद भन्दै आफूहरु अघि नबढ्ने जनाए । २०७५जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा हुँदै गर्दा पाटीले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको नभुल्न आग्रह गरे । संविधानअनुरुप बहुमत प्रचण्ड– माधव समूहमा रहेको भन्दै नेकपाको चिन्ह पनि बहुमततर्फै हुने संकेत गरे । भट्टराईले देशलाई युद्दतर्फ नधकेल्न ओलीलाई चेतावनी दिए ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा सांसद धर्मशिला चापागाईँले पार्टी एकताको समयमा ल्याएको खुशी प्रधानमन्त्रीले छिनभरमा नै समाप्त पारेको जनाइन् । दुईतिहाइ नेपाली जनताले दिएको मत ओलीले लत्याएको उनले आरोप लगाइन् । सहिदको रगतले लेखिएको संविधानको अपहेलना ओलीद्वारा भएको चापागाईँले जनाइन् । “जनताले विश्वास गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आफूलाई ग्लानी भएको छ ” चापागाईँले भनिन्, “केपी ओली तपाईंलाई संविधान विघटन गर्ने हिम्मत कसरी आयो ? सुखानीका जनतालाई साँक्षी राखेर प्रश्न गर्छु नेपाली जनताको रगतमाथि होली खेल्ने अधिकार कसले दियो ?” कोभिडको समयमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार गर्न ओली तत्पर रहेको चापागाईँको भनाई छ ।
सरकारका गलत कदमका विरुद्ध आवाज उठाउन सांसदहरुको मुख ओलीले थुनेको उनले जनाइन् । “म पार्टीभन्दा माथि छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले सोच्नु भयो” उनले भनिन्, “पार्टी मातहत सरकार हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।” निर्मला पन्तको हत्यारा खोज्नसमेत सरकार चुकेको भन्दै उनले भनिन्, “हामी हत्यारा पत्ता लगाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासम्म पुग्यौँ उहाँले त पश्चिमी मुलुकमा नेपालमा भन्दा धैरै बलात्कारका घटना हुने गरेको भन्दै लजास्पद जवाफ दिनुभयो, अनि हामीले उहाँलाई गृहमन्त्री मान्ने ?”
संविधानसभा सदस्य रविन कोइरालाले ओलीका कारण संविधानको रक्षा हुन नसकेको जनाए । ओलीले राष्ट्रिय एकता भंग गरेको भन्दै आफूहरु एकता भंगको पक्षमा नरहेको जनाए । ‘अहिले नेकपा भन्ने पार्टी कसले प्राप्त गर्छ भन्ने विषय छ , बहुमत हुनेले नेकपाको चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्छ । कोभिड– १९को समयमा पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन’ कोइरालाले जिकिर गरे ।